Shirkada Boliden oo loo haysto dalka Chile dad cuduro ku asiibeen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Calanka shirkadda Boliden . Foto INTS KALNINS
Shirkada Boliden oo loo haysto dalka Chile dad cuduro ku asiibeen
La daabacay tisdag 17 oktober 2017 kl 10.38
Maxkamadda degmada Skellefteå ayaa waxaa maanta ka bilaabatey qaadidda dacwad u dhaxeysa shirkadda Boliden iyo qiyaastii 800 oo qof oo u dhalatey dalka Chile, kuwaas oo shirkaddaas magdhow ka dalbanaya.
Arrinkaan ayaa la xiriira walxa sun ah oo shirkadda Boliden ay sanooyinkii sideetamaadkii qarnigii hore gufarkooda ka dhoofisey warshad macdaneed oo ay markaas ku laheyd degmada Skellefteå, una dhoofisey sanooyinkii 1984-tii ilaa iyo 1985-tii meel dad ku noolaayeen oo u dhow magaalo lagu magacaabo Arica oo ku taala dalka Chile.
Dad 800 oo qof gaaraya oo iyagu meeshaas sunta lagu shubey ka agdhawaa, ayaa waxay imminka shirkaddaas Boliden ka dalbanayaan magdhow la xiriira dhibaatooyinkii caafimaad ahaan ay suntaasi u geysatey.
Johan Öberg oo ah qareenka u doodaya dadka reer Chile u dhashey oo suntaas ku waxyeeloobey ayaa wuxu yiri sidan:
- Warshaddii shirkadda Boliden ay ku laheyd degmada Skellefteå ayaa waxay dhoofisey sun aad u farabadan, ka hor intii aysan shirkaddaasi sunta halkaas u dhoofina dadka halkaas ku nooli dhib ma qabin umana dhiman jirin cudurada kansarka ee gala ilma galeenka iyo kan maskaxda gala , ayuu yiri Johan Öberg.
Xilligii sagaashameeyadii qarnigii la soo dhaafey ayaa dadka ku nool magaalada Arica waxaa ku dhacey cuduro kala duwan oo ay ka mid yihiin kansarka, qufac aan kala go’ laheyn iyo cudura kale oo lafaha ku dhaca.
Shirkadda Boliden oo iyadu ah shirkad macdanta qodda ayaa iyadu eedeymahaas iska difaacdey taas oo sheegtey in xilligaas ay shirkaddoodu raacdey sharciyadii iyo qawaaniintii xilligaas ka jirey dalalka Chile iyo Sweden labadaba, labada dalna ay hawshooda ogaayeen.
Klas Nilsson oo ah madaxa dhanka warfaafinta u qaabilsan shirkadda Boliden ayaa isagoo arrinkaan ka hadlaya wuxuu yiri sidan:
- Ugu horeyntii waxaanu aad uga xunahay in dadka halkaas dagan ay dhibaato suntaas ka soo gaartey . Shirkadayadu waxay qaadaneysaa mas’uuliyadda shirkadda aanu ka hawlgalno laakiin sidaas oo ay tahay ma qaadi karno mas’uuliyadda falal iyo go’aano tobanaan sano ka hor ka dhacey goobo banaanka ka ah shirkadayada, ayuu yiri Klas Nilsson oo ah madaxa dhanka warfaafinta u qaabilsan shirkadda Boliden.